EFESỌS 4 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (EFE 4)
Ya mere, mụ onwe m bụ Pọl onye nọ nꞌụlọ mkpọrọ nꞌihi na m na-ejere Onyenwe anyị ozi, na-arịọ unu ka unu bie ndụ kwesịrị ọkpụkpọ Chineke kpọrọ unu ịnata ngọzi ndị a nile dị ebube.
Nọọnụ nꞌudo nꞌetiti onwe unu gbalịakwanụ ime ka ịdị nꞌotu unu dịgide nꞌime Mmụọ Nsọ.
Ọ bụ nanị otu anụ ahụ Kraịst dị, otu Mmụọ Nsọ dịkwa. Anyị nwekwara nanị otu olileanya nke Chineke debere nꞌihu anyị.
Ọ bụ nanị otu Onyenwe anyị dị, otu okwukwe na otu baptizim.
Ọ bụkwa nanị otu Chineke dị onye bụ Nna ihe nile na onye na-achị ihe nile, na onye na-arụ ọrụ ya nꞌime ihe nile, na-ebikwa nꞌime ihe nile.
Ma Chineke enyela anyị nile nꞌotu nꞌotu onyinye dị iche iche site nꞌụlọ akụ onyinye Kraịst.
Nꞌihi na dị ka akwụkwọ nsọ kwuru, “Mgbe ọ rigoro gaa nꞌelu, o duuru igwe ndị a dọtara nꞌagha, nyekwa ụmụ mmadụ onyinye.”
Lee na akwụkwọ nsọ kwuru na ọ rigoro nꞌeluigwe! Nke a na-egosi na o buru ụzọ site nꞌeluigwe rịdata jeruo na nsọtụ ala.
Onye ahụ si nꞌelu rịdata bụkwa otu onye ahụ rigoro nꞌelu, ka ọ bụrụ onye na-achị ihe nile nꞌebe nile.
Gịnị mere o jiri nye ha onyinye ndị a? O nyere onyinye ndị a ime ka ụmụ Chineke bụrụ ndị zuru oke ịrụrụ Chineke ọrụ iwuli nzukọ ya bụ ahụ Kraịst elu. Ka onye ọ bụla nꞌime ụmụ Chineke bụrụ ndị dị ike na ndị tozuru oke nꞌihe ọmụma,
tutuu anyị nile ekwekọtaa nꞌotu ihe ahụ banyere nzọpụta anyị, tutuu anyị enwee ọmụma ihe juru eju banyere Ọkpara Chineke. Na tutuu anyị abụrụ ndị tozuru oke nꞌime Onyenwe anyị, mgbe e mere ka ọdịdị Kraịst jupụta nꞌime anyị.
Kama ka anyị gbasoo eziokwu site na mmụọ ịhụnanya, ka anyị gwarịtaa ibe anyị eziokwu mesokwaa ha mmeso eziokwu, gbalịsiekwa ike ịghọ Kraịst onye bụ onyeisi nzukọ ya bụ chọọchị.
Nꞌihi na ọ bụ site na ya ka e mere ka anụ ahụ nile jikọtaa bụrụ otu. Akụkụ nile ọ bụla na-arụ ọrụ ya nke ọma, na-esite nꞌụzọ ahụ enyere akụkụ ndị ọzọ aka, ime ka ha too, na iwuli ha elu site nꞌịhụnanya.
Ya mere, dị ka ndị e jikọtara ha na Onyenwe anyị nꞌotu, ana m agwa unu, na-arịọkwa unu, ka unu hapụ ibi ndụ dị ka ndị na-amaghị Chineke, ndị echiche ha na-abaghị uru.
Ma nke a abụghị ụdị ndụ Kraịst ziri unu ibi
ma ọ bụrụ na unu anụla ihe banyere ya, ọ bụrụkwa na unu amụtala ihe site nꞌaka ya banyere ezi ndụ ahụ dị nꞌime Kraịst.
Ya mere, tufuonụ ọdịdị ochie ahụ dị nꞌime unu, ọdịdị ochie ahụ na-eme ka unu mee ihe ọjọọ dị iche iche nꞌoge gara aga. Ee, ọdịdị ochie ahụ rere ure, nke jupụtara nꞌagụụ ime ihe ọjọọ nile.
Ugbu a, e nwoghaala ndụ unu site nꞌinye unu ndụ ọhụrụ.
Dịkwanụ ka ndị dị ọhụrụ na ndị dị iche, ndị dị nsọ na ndị dị mma. Yikwasịnụ onwe unu ọdịdị ọhụrụ ahụ Chineke mere ka ọ dịrị ka ya nꞌịdị nsọ na nꞌịrụ ọrụ ezi omume.
Kwụsịnụ ịgha ụgha nye ibe unu. Kwuonụ eziokwu nye ibe unu, nꞌihi na unu nile bụ ndị e jikọtara nꞌotu nꞌanụ ahụ.
Enyela ekwensu ohere. Nꞌihi na mgbe iwe na-ewe gị, ị pụrụ inye ekwensu ohere ime gị ka i mehie.
Ka onye na-ezu ohi kwụsị izu ohi. Kama ya jiri aka ya abụọ rụpụta ego, ka o nwee ike inyere ndị ọzọ nọ na mkpa aka.
Ka okwu rere ure ọ bụla hapụ isite nꞌọnụ unu pụta. Kama kwuonụ okwu ga-abara ndị ọzọ uru na nke ga-enyere ha aka. Ụdị okwu pụrụ iwuli ndị ọzọ elu na iwetara ha ngọzi.